Santo Daime - WRSP
1890 Raimundo Irineu Serra, nke a na-akpọkarị "Master Irineu," onye guzobere ọdịnala Santo Daime, amụrụ na Brazil.
(c.) 1914 Irineu Serra drankụrụ ayahuasca oge mbụ na mpaghara Amazon nke Brazil, Bolivia na Peru.
1930 “Ọrụ” mbụ ma ọ bụ ememe (trabalho) nke Santo Daime mere na Rio Branco, Brazil.
1965 Sebastião Mota de Melo (nke a na-akpọkarị "Padrinho Sebastião") zutere Mestre Irineu na nke mbụ.
1971 Mestre Irineu nwụrụ.
1975 CEFLURIS nwere ọrụ izizi ya na Colônia Cinco Mil.
1982 Céu do Mar, ụka izizi nke Santo Daime nke dị na ndịda Brazil, mepere n'okpuru nduzi nke Roberto Roberto Silva e Souza.
1983 Céu do Mapiá, nke mechara bụrụ isi ụlọ ọrụ nke CEFLURIS, mepere.
1990 Padrinho Sebastião nwụrụ. Nwa ya nwoke, Alfredo Gregório de Melo (Padrinho Alfredo) ghọrọ onye isi CEFLURIS.
2009 Onye ọka ikpe mpaghara US kpebiri na amachibidoro DEA iwu "iji sacrament tea nke Daime mee ihe" site n'aka ndị ọrụ Santo Daime na Oregon.
Na December 15, 1890, a mụrụ Raimundo Irineu Serra, nwa nke ndị ohu na onye guzobere ọdịnala Santo Daime na São Vicente de Férrer, na steeti ugwu ọwụwa anyanwụ nke Maranhão, Brazil. [Foto dị n'aka nri] (ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ nke Irineu Serra bụ nke a ghọtara na ọ bụ 1892, mana akwụkwọ baptizim e mere n'oge na-adịbeghị anya depụtara ụbọchị dị ka 1890.) (Moreira na MacRae 2011: 70.) Na 1909, Irineu Serra hapụrụ ala nna ya nke ụkọ mmiri ozuzo na jiri ụgbọ mmiri gafee steeti Acre na mpaghara Amazonia nke Brazil, na-achọ ọrụ dị ka taịba roba. N’agbata afọ 1910 na 1912, obere oge ọ bịarutere Acre, Irineu Serra chọtara ọrụ na Commission of Limits (Comissão de Limites) nke chọrọ ịchọpụta ókèala dị n’etiti ókèala Acre na Peru na Bolivia. (Moreira na MacRae 2011: 82).
Na 1914, na ókèala obodo Brasileia, Irineu Serra zutere ụmụnne abụọ, Antônio na André Costa, ndị si Maranhão. (Moreira na MacRae 2011: 86.) Antônio Costa gwara Irineu Serra banyere ayahuasca, mgbe onye Peruvian "ayahuasquero" nke a maara dị ka Don Crescêncio Pizango kpọbatara ya na tii. (MacRae 1992: 48.) Ayahuasca bụ tea psychoactive sitere na osisi vaịn (Banisteriopsis caapi) na akwukwo (Psychotria viridis) nke ụmụ amaala na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ nọ na mpaghara ahụ ji mee ihe. Dị ka akụkọ ọdịnala si dị, n'oge na-adịghị anya mbụ ọ zutere ayahuasca, n'oge ahụmahụ ọhụụ miri emi (miração) nke mere mgbe ọ na-ewere naanị ayahuasca n'oké ọhịa n'ime ụbọchị asatọ ngwa ngwa, Irineu Serra hụrụ ọnwa ka ọ na-abịakwute ya, ka ugo dina n'etiti. Site na ọnwa, otu nwanyị nke ime mmụọ, onye akpọburu Clara na onye mechara mata dịka Queen of the Forest na Nwanyị Nwanyị anyị, pụtara n'ihu ya wee nye ya ọrụ ya ịmalite otu okpukpe ọhụrụ. (Couto 1989: 52.) Irineu Serra ukwe mbu, White Moon (Lua Branca), na-ezo aka na ahụmịhe a. O were ọtụtụ iri afọ tupu Santo Daime dị ka a na-eme taa.
N'oge mbụ ya na mpaghara Amazonia, Irineu Serra nwere mmekọrịta chiri anya na ụmụ amaala na ndị mestizo, ọ bụghị naanị ịmụ etu esi eme ayahuasca, kamakwa ịmara ụzọ dị iche iche nke ọgwụgwọ. (Carioca nd) N'oge ụfọdụ na 1916, mgbe ọ bi na Brasiléia, Irineu Serra malitere isonye n'ememe ayaasasca na otu ndị ọ ga-abụ na ya na ụmụnne Costa, bụ ndị a maara dị ka "Circle of Regeneration and Faith" (Circulo de Regeneração e Fé). Agbanyeghị, Irineu Serra mechara hapụ CRF n'ihi oke mkpagbu ọ nwetara n'aka ndị ọchịchị obodo, yana ikekwe n'ihi esemokwu ya na Antônio Costa. (Dawson 2007: 71.) Ireneu Serra kewara site na CRF dabara na nkewapụ ya na Emília Rosa Amorim, nne nke otu nwa nwoke ọ mụrụ, bụ Vacírio Genésio, a mụrụ na 1918, na nwa ya nke abụọ, nwa nwanyị, Valcirene, nwụrụ na mbubreyo 1919. (Moreira na MacRae 2011: 112.)
Na mbido 1920, Irineu Serra kwagara Rio Branco, ebe ọ laghachiri n'ọrụ agha, sonye na Força Policial (Moreira na MacRae 2011: 112). Irineu Serra nọgidere na Força Policial ruo 1932, lara ezumike nká na ọkwa nke koporal (MacRae 1991: 50.) N'ime afọ ndị fọdụrụ na ndụ ya, Irineu Serra bụ ọkachasị kwado onwe ya dịka onye ọrụ ugbo.
Ka ọ na-erule mmalite afọ ndị 1930, a malitere ịkpọ Irineu Serra dị ka Master Irineu (Mestre Irineu) na sacramental abinụ iwere na “ọrụ” / ememe (trabalhos) malitere ka a kpọọ ya Santo Daime, nke n’asụsụ Portuguese pụtara “nsọ” (Santo) “nye m” (Daime), dị ka “nye m Ìhè, nye m ịhụnanya,” arịrịọ a na-ahụkarị na emume Santo Daime (Dawson 2007: 72). Na May 26, 1930, trabalho mbụ nke okpukpe Santo Daime mere, n'ụlọ Mestre Irineu, naanị Irineu na mmadụ abụọ ọzọ na-ekere òkè (Fróes 1986: 37).
N'ime iri afọ ole na ole sochirinụ, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị mmadụ malitere isonye n'ememe Santo Daime, ọ bụghị naanị site na ike ihe ọ theụ drinkụ ahụ, kamakwa site na ike ịgwọ ọrịa nke Mestre Irineu. Okpukpe Santo Daime ji nwayọọ nwayọọ malite ịmalite, na-enwe usoro ihe omimi dị iche iche maka ememe ndị na-elekwasị anya na ọgwụgwọ, ntụgharị uche, na ememe obodo. Na 1937, Mestre Irineu lụrụ Raimunda Marques Feitosa wee kewapụ ya na 1955. Ọ lụrụ ọzọ otu afọ mgbe e mesịrị na nwanyị ahụ bụ onye isi ugbu a nke otu ngalaba dị mkpa nke Holy Summit (Alto Santo) usoro ọmụmụ nke Santo Daime, Peregrina Gomes Serra ("Genealogy" nd).
Na 1961, ma ọ dịkarịa ala akụkụ dị ka ụzọ iji nyere okpukpe ọhụrụ ya aka inweta nkwado iwu, ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ Mestre Irineu bụ isi, ma eleghị anya ọ rịọrọ ya, sonyeere Esoteric Circle of the Communion of Thought (Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento), nzukọ ime mmụọ hiwere na São Paulo na 1909 nke kesara ọtụtụ nkuzi sitere na yoga, Theosophy, na Spiritism (Moreira na MacRae 2011: 296). Ọtụtụ atụmatụ nke liturgy nke Santo Daime nwere ike ịlaghachi na mkpakọrịta a, dịka nnọkọ oge niile na nke iri na ise na nke iri atọ nke ọnwa ọ bụla; ụfọdụ ekpere ndị dị mkpa; na ụkpụrụ nke Mmakọ, Lovehụnanya, Eziokwu na ikpe ziri ezi dị ka nkuzi ndị bụ isi (Moreira na MacRae 2011: 304.) A na-ekwukwa na Mestre Irineu ghọrọ onye gụrụ akwụkwọ site na ịgụ akwụkwọ akụkọ Esoteric Circle nke e zigara ya na ndị otu ya kwa ọnwa (Carioco) nd).
Na 1963, isi ụlọ ọrụ nke Esoteric Circle, mgbe ọ jụchara aha mbụ Mestre Irineu chọrọ maka nzukọ ya, Free Center (Centro Livre), a tụrụ aro kama aha Center of Mental Radiation of the Level of the God Light (Centro de Irradiação Echiche Tattwa Luz Divina). Mestre Irineu nakweere aro a. Agbanyeghị, oge ụfọdụ na 1970, Mestre mụtara na ndị isi nhazi na São Paulo achọghị ka Daime jee ozi na nzukọ Esoteric Circle na Rio Branco. Mestre Irineu zara ya ngwa ngwa, na-asị “Ọ bụrụ na ha achọghị Daime ha, ha achọghịkwa m. Abụ m Daime na Daime bụ m. ” Mgbe Mestre Irineu malitere na Esoteric Circle, ọ malitere zoo aka na etiti ya dị ka Center of Universal Christian Illumination (Centro de Illuminação Cristã Universal), aha nke ndị ndu Esoteric Circle bu ụzọ chọọ na São Paulo, nke bụkwa aha nke ejiri mara ebe etiti ya ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị (Moreira na MacRae 2011: 297-304).
Na 1965, Sebastião Mota de Melo, nke a maara dị ka Padrinho Sebastião, zutere Mestre Irineu maka oge mbụ (Fróes 1986: 54). Amụrụ na October 7, 1920 na steeti Amazonas, Padrinho Sebastião bụ onye na-akụ roba na onye na-eme ụgbọ epeepe. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụkwa onye mgbaasị mgbaasị nke nyere mmadụ abụọ a maara nke ọma na akara mmụọ nke Kardec, Dọkịta José Bezerra de Menezes na Prọfesọ Antônio Jorge. Na 1959, ọ kpọgara ezinụlọ ya na Colony Puku Puku ise (Colônia Cinco Mil), mmezi na mpụga nke Rio Branco ebe ndị ikwu nke nwunye ya, Rita Gregório, bi (MacRae 1992: 56). N'ịga n'ihu dị ka onye na-agwọ ọrịa ime mmụọ, Padrinho Sebastião malitere ọrịa imeju na-adịghị ala ala, na ọ mechara gaa Mestre Irineu ịchọ ọgwụgwọ. Padrinho Sebastião nwetara ọgwụgwọ zuru oke mgbe otu oge ofụsịrị Daime. N'oge nnọkọ a, ọ hụrụ onwe ya na mpụga ahụ ya, na-ele ya ka ọ na-ehulata n'ala, ebe ụmụ nwoke abụọ, "na-adị ka ọkụ," wepụtara ọkpụkpụ ya na akụkụ ahụ ya wee jiri nko, wepụtara "ụmụ ahụhụ atọ tozuru oke" ha kwuru na ọ bụ maka ọrịa ya (Polari 2010: 76-77). Mgbe nnọkọ a gasịrị, Padrinho Sebastião malitere ịga ọrụ na Alto Santo, traktị nke ala dị na mpụga Rio Branco nke Gọvanọ Acre nyere Mestre Irineu na 1945 ma bụrụ ebe ọhụrụ nke etiti Mestre Irineu (Dawson 2007) (72). Padrinho Sebastião biliri ngwa ngwa n'ọchịchị chọọchị, yana ikike Mestre Irineu, n'oge na-adịghị anya guzobere ụlọ ọrụ Santo Daime nke nwere mmekọ na Colônia Cinco Mil. (Padrinho Sebastião na ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya, na-agakarị ije ọtụtụ awa iji gaa "ọrụ mmemme" dị mkpa na Alto Santo).
Mgbe Mestre Irineu nwụsịrị na 1971, Padrinho Sebastião na ụmụazụ ya nọgidere na-esonyere nzukọ Alto Santo, n'agbanyeghị na oge na-aga, nsogbu na-arịwanye elu n'etiti otu abụọ ahụ. Ha mechara kewaa ibe ha na 1973 mgbe esemokwu gbasara otu esi azaghachi mkpagbu nke ndị isi obodo, nkewa nke emepụtara site na okike nke Eclectic Center nke Na-asọpụta Ìhè Universal Raimundo Irineu Serra, ma ọ bụ CEFLURIS, (Centro Ecléctico da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra nke a), bụ nke nwere ọrụ mbụ ya na 1975 na Colônia Cinco Mil (Dawson 2007: 75).
Mgbe Padrinho Sebastião, ya na ezinụlọ ya na ihe dị ka ndị na-eso ụzọ 1970 kwusịrị oge ngwangwa na ngwụcha afọ ndị 100, gara 1980 gaa n'otu ebe dịpụrụ adịpụ na steeti Amazonas nke mechara bụrụ Osimiri Gold (Rio de Ouro). Ọtụtụ narị ndị na-eso ụzọ ya, nọ na Colônia Cinco Mil. Ndị Institute of Colonization and Agricultural Reform akwadoro saịtị Rio de Ouro, ma ọ bụ INCRA, (Instituto de Colonização e Reforma Agrária). Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ nke ịrụsi ọrụ ike, ikpochasị ala, iwu ụlọ, ịmalite ịkọ ugbo, na iwepụta latex na osisi roba, ndị nnọchi anya otu ụlọ ọrụ si ndịda Brazil kwuru na ha nwere ókèala ahụ. Ya mere, na Jenụwarị, 1983, Padrinho Sebastião na obere ìgwè nke ndị na-eso ụzọ ya, na-agbaso aro nke INCRA, kwagara mpaghara ọzọ, na steeti Amazonas, n'oge a miri emi n'ime oke ọhịa dị n'akụkụ Mapiá igarapé, obere ndị ọgaranya nke osimiri Purús. N'ime afọ na-esote, ihe dị ka ndị otu 300 biri ebe ahụ, nke mechara bụrụ Sky nke Mapiá (Céu do Mapiá) (Schmidt 2007: 57).
Na 1982, mmeba nke ọdịnala Santo Daime na mpụga mpaghara Amazon malitere site na nguzobe nke Sky nke Oké Osimiri (Céu do Mar) na Rio de Janeiro nke Paulo Roberto Silva e Souza dere. N'oge na-adịghị anya, e guzobere ọtụtụ ụlọ ọrụ Santo Daime na Rio de Janeiro na gburugburu ya, na afọ ole na ole sochirinụ, ọdịnala Santo Daime gbasara n'ọtụtụ obodo ndị ọzọ dị na Brazil. (Schmidt 2007: 59-60).
Na 1990, Padrinho Sebastião nwụrụ, nwa ya nwoke, Alfredo Gregório de Melo (nke a na-akpọkarị Padrinho Alfredo) ghọrọ onye isi nke CEFLURIS. N'ime afọ ndị sochirinụ, e guzobere òtù Santo Daime nwere njikọ na CEFLURIS n'ọtụtụ ebe na Latin America, Europe, Japan, na United States.
Ọ bụ ezie na enweghị nkuzi niile enyere iwu na ọdịnala Santo Daime, agbanyeghị enwere ọtụtụ nkwenkwe na, opekata mpe na nzuzo, ọtụtụ ndị na-eme Santo Daime ga-ekwenye na ya. Nkwenye ndị a na-esite na nnakọta abụ dị iche iche (hinarios) nke ndị okenye Santo Daime (eg, Mestre Irineu, Padrinho Sebastião, na ndị ọzọ). A na - ekwu na enwetara "hinarios" site na "astral," akụkụ mmụọ dị elu nke eziokwu (Cemin 2006: 265). Themesfọdụ isiokwu na-apụtakarị n'ime hinarios ndị a, isiokwu ndị enwere ike ịchọta nke kachasị mkpa, "The Cross" (O Cruzeiro) nke Mestre Irineu. Dịka ọmụmaatụ, a na-akpọ ọnụnọ Chineke nke a na-ekwu na ọ bụ nke dị n'ime Daime Juramidam, ma ghọta na ọ bụ mmụọ nke Kraịst ahụ n’onwe ya. Dị ka ndị dị otú a, a hụrụ Juramidam dị ka onye dị nsọ nke na-azọpụta, na-akụzi ihe, na-agwọ ọrịa, ma na-eweta Ìhè na Ike na Lovehụnanya na mkpakọrịta (irmandade), ụmụnna nwoke na ụmụnna nwanyị nke obodo Daime (MacRae 1992: 53).
Daimista cosmology dị mgbagwoju anya. N'ọtụtụ ụzọ Santo Daime bụ njikọ nke Iso Christianityzọ Kraịst na ọtụtụ ụmụ amaala obodo na mestizo nkwenkwe na omume. Tinyere otu ihe nke animistic na-ekwusi ike na ọnụnọ ime mmụọ nke anyanwụ, ọnwa, kpakpando, ụwa, ifufe, oké osimiri, yana nkwanye ùgwù dị ukwuu nke ọtụtụ mmadụ nke Chi Chineke (Seres Divinos) na-eme ka ụwa nke astral (nke ime mmụọ) jupụta, a na-elekwasịkwa anya na ukwe na ọnụ ọgụgụ nke "Nna Ebighị Ebi nke Chineke," "Nne Nwanyị Na-amaghị Nwoke," na "Jizọs Kraịst Onye Mgbapụta" (Dawson 2007: 73). Enwekwara ike banyere ndị nsọ Katọlik dị iche iche. St. John Baptist dị mkpa karịsịa, nyere na ọtụtụ Daimistas n'ime ụka CEFLURIS kwenyere na Padrinho Sebastião bụ nlọghachi nke mmụọ ya (Dawson 2007: 76). Akwadoro na ngwakọ ngwakọ a, e nwekwara ọtụtụ nkwenkwe neo-esoteric, dị ka nkwenkwe na karma, ịlọ ụwa, na evolushọn ime mmụọ. Nkwenkwe ndị a na-enye nghọta na ahụmịhe anyị ugbu a banyere ụwa bụ ihe omimi; na echiche nke panentheistic na chi ("Abụ m") Onwe bi n'ime onye ọ bụla ma jupụta ụwa niile. A na-ekwenyekwa ịhụnanya na ike nke nne nne Chineke ugboro ugboro na abụ, nke mere na ọdịdị nke Chineke n'onwe ya na-apụtakarị ka a ghọtara ya dị ka nwoke na nwanyị n'otu oge (MacRae 1992: 54).
Ihe a na-ele anya n’ememe Santo Daime nke “ọrụ” gbasara ọtụtụ abụ ọma, ma nke zuru ezus ma ọ bụ nhọrọ nke kewara ekewa. Mgbe a gụchara ekpere ụfọdụ nke ekpere ụfọdụ, nke sitere na Katọlik na Esoteric Circle, na ọrụ ofufe nke Daime, a na-abụ ukwe ndị a n'ememe ahụ (salão). [Foto dị n'aka nri] N'etiti salão e nwere ebe ịchụàjà (mesa), oge ụfọdụ okpokoro akụkụ anọ ma ọ bụ akụkụ anọ, ma ọ bụ na-abawanye n'ime ụka CEFLURIS, okpokoro nke yiri kpakpando isii nke David. Ke ufọt Mesa bụ obe (njem) na nke abụọ, dị mkpụmkpụ, ogwe osisi na-agba ọsọ na crossbeam mbụ. Dafọdụ Daimistas kwuru na obe nke abụọ a na-anọchite anya ọbịbịa nke abụọ nke Kraịst, nke a ghọtara na ọ bụ ọmụmụ nke amamịghe zuru ụwa ọnụ nke Kraịst n'ime onye ọ bụla, usoro mgbanwe nke Daime (Polari 2010: xxv ). Nakwa na mesa ahụ bụ ihe kandụl, ifuru, na foto nke ndị dị iche iche dị nsọ na / ma ọ bụ ndị okenye Daime.
Ndị isi "ememme ọrụ" na-echeta ememe okpukpe Katọlik, ụbọchị ọmụmụ nke ndị okenye Daime, ma ọ bụ oge ndị ọzọ ememe obodo. A na-akpọkarị ọrụ ndị a hinarios, n'ihi na a ga-abụ abụ zuru ezu nke otu okenye ma ọ bụ karịa Daime, ma ọ bụ bailados (ịgba egwú) na nke ahụ, ha hiwere isi n ’usoro ịgba egwu dị mfe. Ọrụ ndị a na-amalitekarị na mgbede ma na-adịru abalị niile; a na-ede ha akara site na nkwụsịtụ nke na-ewe ebe ọ bụla site na elekere ruo elekere abụọ n'etiti abalị. A na-eje ozi Daime ọtụtụ oge na emume a, ndị nwoke na ndị nwanyị na-agbakọ n'akụkụ n'akụkụ nke salão iji nata obere iko nke sacrament. N'oge ọrụ ndị a, "ndị edo edo" (fardados) ndi bu ndi choochi ulo uka, yiri akwa ocha (farda branca). [Foto dị n'aka nri] Maka ụmụ nwanyị a bụ uwe dị mgbagwoju anya nke mejupụtara uwe mwụda na-acha ọcha ogologo ogologo nke ejiri obere uwe mwụda na-acha akwụkwọ ndụ dị mkpụmkpụ, tinyere uwe elu na-acha ọcha na-acha ọcha ejiri mma dị iche iche wee chọọ ya mma, tinyekwara tiara dị mfe. n’elu isi ha. Maka ụmụ nwoke, farda branca bụ uwe na-acha ọcha na uwe ogologo ọkpa na eriri mmiri na obere kpakpando isii nwere akara aka agbatị n'ime obi (Dawson 2007: 74). A haziri ndị otu ahụ n'ụzọ siri ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị agha, guzobere n'ahịrị gburugburu mesa, hazie dịka njirimara dị ka okike ha (ụmụ nwoke n'akụkụ salão ahụ, ụmụ nwanyị n'akụkụ nke ọzọ), ogo, afọ, na ọnọdụ alụmdi na nwunye. Ewezuga obere oge ezumike, a na-atụ anya ka onye ọ bụla nọrọ na ya ma ọ bụ ebe ya, gba egwu azụ na-apụta na ụfọdụ dị mfe ụzọ, N'oge a ha na-ekwe ukwe nke hinario, tinyere egwu nke ụbọ akwara na ngwa ndị ọzọ, dịka ọjà ma ọ bụ ukwe, na ụda ụda nke ụja (maracas). [Foto dị n'aka nri] Dị ka ọ dị, ha na-enwe obi ụtọ ma na-ewuli elu nke ugbu a (corrente) nke Ike (Ike) nke a na - ekwu na ọ ga - agbasa na ntanetị na ebili mmiri gburugburu salão na n'osisi, site na astral ruo ụwa a (Dawson 2007: 76).
Theta ahụconcentração) bụ ọrụ ọzọ dị mkpa Santo Daime. N'ezie, ọrụ izizi mbụ Daime bụ a concentração (Fróes 1986: 37). Ndị ụka na-eyi yunifọm ndị na-acha anụnụ anụnụ (farda azul) n'oge ọrụ a, yana ọtụtụ ọrụ ọgwụgwọ na Mass dị nsọ. Maka ụmụ nwanyị, farda azul bụ uwe elu nwanyị na-acha ọcha, akwa olu na-acha anụnụ anụnụ, yana uwe mwụda na-acha anụnụ anụnụ dị ogologo. Maka ụmụ nwoke, farda azul bụ uwe ejiji na-acha ọcha, uwe ogologo na-acha anụnụ anụnụ, eriri na-acha anụnụ anụnụ, na kpakpando ahụ agbatị n'ime obi (Dawson 2007: 74). Na chọọchị Daime buru ibu, ọrụ ịta ahụhụ na-ewere ọnọdụ na nke iri na ise na nke iri atọ nke ọnwa ọ bụla. Ha na-anọru ihe dịka elekere anọ wee jikọta nhọrọ dị iche iche nke ukwe na ekpere dị iche iche, yana ogologo oge nke ịgbachi nkịtị na ọ dịkarịa ala ugboro abụọ nke Daime. A na-etinye uche mgbe ị nọ ọdụ, belụsọ akụkụ ikpeazụ nke ọrụ ahụ mgbe a gwara ndị otu ka ha guzoro mgbe ha na-abụ abụ iri na abụọ ikpeazụ nke Mestre Irineu Cruzeiro. A maara ndị a ma Nkọwa Novos ma ọ bụ na Cruzerinho, ha ghotara na ha na-anọchite nchikota nke nkuzi nke ọdịnala Santo Daime. (MacRae 1992, 86.) Oge ntinye uche / ntụgharị uche n'onwe ya na-agbatịkarị ihe karịrị otu elekere ma na-ewere ọnọdụ na-agbachi nkịtị. Ihe a na-atụ anya ya bụ na a tụgharịrị uche Daimista na na ọ ga-anwa imechi ya / uche ya ma meghee ihe ọ bụla Daime na-eweta. Nke a nwere ike ịgụnye ahụmịhe ọhụụ dị ike (ọrụ ebube).
Ọ bụ ezie na Daimistas na-achọ mgbe ụfọdụ ịgwa ndị ọzọ banyere ọrụ ebube ha, akụkọ ndị a chịkọtara ugboro ugboro mesie ike na mirações abụghị ọhụụ oge (Schmidt 2007: 167). Kama nke ahụ, ndị sonyere na-ekere òkè na usoro dị egwu nke nwere ike ịgụnye ikpughe ọmarịcha usoro geometric mara mma [Foto dị n'aka nri] n'ime nghọta nke onye so na ya; mmekọrịta doro anya na ọtụtụ ndị na-adịghị ahụ anya; na-aga n'ọtụtụ, ụdị dịgasị iche iche, nke ime mmụọ nke eziokwu; na nnwogha nke uwa okike, huru dika nke na-enwu n’enwu Chineke (Shannon 2002: 17-19). Mirações nwekwara ike ịgụnye ịnyefe nghọta miri emi. Otu nwanyị America, na-akọwa oge mbụ ọ na-a drinkingụ Daime, kwuru, sị,
“Ahụtụbeghị m. . . dị otú ahụ miri owuwe na udo. Ọ dị ka a ga-asị na m bụ ebe etiti ihe niile na-agagharị — isi ime mmụọ dị n'etiti ụwa nke ihe, isi nke Ìhè nke na site na ya ka mkpughe, egwu Chineke nke ciousmata na onwe ya na-ebili ma na-agbadata, na-egosipụta ma na-agbaze ụwa nke ụdị na nro. . . . Ihe omuma di egwu banyere udiri uche nke uche na ihe omuma tinyere ntuziaka banyere ndu onwe m na ebumnuche puru: ihe nile na eme na nkwekorita na izu oke ”(Mkparita uka nke onwe).
Ikekwe ihe kachasị ememme Santo Daime bụ Santa Misa (Holy Mass). A na-abụ ya ma na Sọnde mbụ ma ọ bụ Mọnde nke ọnwa, dabere na usoro ụka, ma ọ bụ na ụbọchị akọwapụtara metụtara ọnwụ nke ndị otu obodo ma ọ bụ ụbọchị ncheta nke ndị okenye Santo Daime a ma ama. Santa Missa, mgbe a gụsịrị akwụkwọ rosary ndị Katọlik na oriri nke Daime (ndị otu Alto Santo adịghị a Daụbiga Daime mmanya n'oge Mass dị nsọ) lekwasịrị anya na abụ iri na-ekwu maka okwu ọnwụ, abụ a na-agụ ka ị na-eguzo, na-enweghị ihe mgbakwunye ọ bụla (Cemin, 2006: 274). N’etiti ukwe nke ọ bụla, a na-agụpụkwa Fada anyị atọ na Hail Marys, tinyere ekpere ndị Katọlik ndị ọzọ.
Ma Mestre Irineu na Padrinho Sebastião bụ ndị a maara dị ka ndị na-agwọ ọrịa ime mmụọ dị ike, yabụ na ọ bụ naanị ọrụ ọrụ ịgwọ ọrịa bụ ihe ọzọ dị mkpa nke emume Santo Daime. Daimistas na-ekwenye na ọrịa, ma ọ bụ nke anụ ahụ ma ọ bụ nke uche, bụkarị ngosipụta nke enweghị mmekọrịta ime mmụọ. Enweghi nha anya a na - aputa site na ihe ozo nke omume na ndu ndi gara aga ma / ma obu ihe mmadu na - emetuta ya ugbu a (Dawson 2007: 82). Ọ bụ ezie na Daimistas ga-ejikarị ọgwụ eji eme ihe, yana ọtụtụ usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ, n'akụkụ ụfọdụ, a ghọtara na ị drinkingụ Daime na-agwọ ọrịa, n'ihi na ime nke a na-enye ọnọdụ dị ike nke ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ime ka onwe ha dị ọcha n'ụzọ ime mmụọ, yana ghọta ihe kpatara nsogbu ha (Schmidt 2007: 128). Agbanyeghị, site na mmalite, oge dị iche iche ewepụtara maka ọrụ ndị raara nye ọgwụgwọ anụ ahụ na nke mmetụta uche nke mmadụ n'ime obodo. Dịka ọmụmaatụ, n'ime iri afọ mbụ nke mmepe nke obodo Mestre Irineu, dịka ọmụmaatụ, ọrụ ịta ahụhụ nke bu otu ọgwụgwọ ebumnuche mere na Wednesday ọ bụla. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọkà mmụta ekwuola na, n'oge a, ihe ngosi dị iche iche na-emekarị n'oge ọrụ ọgwụgwọ ndị a, ka oge na-aga, Mestre Irineu ji nwayọọ nwayọọ malite iwepụ ọnụnọ nke ụdị ọrụ Afro-Brazil (Labate na Pacheco 2011: 83). Kama nke ahụ, ọ malitere imesi ike usoro ọgwụgwọ dị na esoteric ebube (dịka, nzukọ Esoteric Circle), dị ka radiral astral energy (irradiação) (Dawson 2007: 83). Ka ọ dị ugbu a, usoro Alto Santo nke Santo Daime na-eleda anya na ịjụ ase, ebe usoro CEFLURIS, nke na-agbasokarị nke ọma na okike, na-agbasokarị mmetụta ndị na-agba ọsọ na-emetụta, dịka ọmụmaatụ, site n'okpukpe Afro-Brazil a ma ama, Umbanda (Dawson 2013 Nke a N'ime ọnọdụ CEFLURIS, enwere ọrụ ịgwọ ọrịa dị iche iche nke na-ajụkarị ọhụụ. Iji maa atụ, onye na-ajụ mmụọ nwere ike itinye ndị ime mmụọ "dị elu" dị iche iche na-achọ inye aka na usoro ọgwụgwọ. N'aka nke ọzọ, onye na-ajụ ase nwere ike igosipụta "mmụọ nhụjuanya" bụ onye, ​​a na-ekwu, na-abịa ọrụ ndị Light of the Daime dọtara, na-achọ "ọrụ ebere" mmụọ nke enyere na ebe ahụ (Schmidt 26: 30).
Ememe ememe nke Daime n'onwe ya (feitio), O doro anya na ememe kachasị mkpa n'ime Santo Daime, n'ihi na ọ na-arụpụta ihe ọ sacụ sacụ nke oriri nsọ nke bụ ebe a na-eme ihe omume Santo Daime niile. Usoro siri ike, nke gbagwojuru anya nke na-agbatị oge gafere ogologo oge site na ọtụtụ ụbọchị ruo ihe karịrị otu izu, feitio dị oke mkpa ma na-achọsi ike. Menmụ nwoke nwere ọrụ maka iwe ihe ubi, igbubi, ịkpụcha na ịkụcha ihe Banisteriopsis caapi osisi vaịn (a na-akpọ jagube or cipó nke Daimistas), ebe ọ bụ na a ghọtara na jagube jikọtara ya na ike nwoke. N'aka nke ya, ọ na-abụkarị ụmụ nwanyị na-achịkọta ma hichaa epupụta nke Psychotria viridis shrub, nke a maara dika "eze nwanyị" (mmiri ozuzo - ma ọ bụ chacrona) site n'aka Daimistas), nke a na-eche igosipụta ike nwanyị (Dawson 2007: 77). A na-etinyezi ihe abụọ ndị a, n'igbe ndị ọzọ, na nnukwu ite ọla nke jupụtara na mmiri ọhụrụ. Menmụ nwoke esichaa jagube na rainha ruo ọtụtụ awa ruo mgbe mmiri ahụ dị ihe dịka otu ụzọ n’ụzọ atọ nke mbụ ya. Mmiri a na-agbapu ma tinye ya n'otu akụkụ. Mgbe ekepụtara mmiri mmiri a, ọ wụsara ya ọhụụ ichikota jagube na mmiri ozuzo ma sie ya ruo otutu oge ruo mgbe onye na-elekọta usoro ahụ kpebiri na Daime emeela. A na-agbazi Daime a n'onwe ya ma belata ọtụtụ oge, na-eme ọtụtụ ihe Daime, concoctions na-eme ka ọ dị jụụ, karama, ma jiri nlezianya kpọọ ya. ndapụta n'ụzọ, na Daime na-enyekarị ndị sonyere ya. A ghọtara feitio ka ọ bụrụ ezigbo usoro alchemical, n'oge nke ihe ọkụ na mmiri jikọtara na ike nwoke na nwanyị nke jagube na mmiri ozuzo. A na-ekwukwa na ike uche na nke mmetụta uche nke ndị sonyere na-esonye na Daime, n'ihi nke a mesiri ike ịgbachi nkịtị, nlebara anya na nkwanye ùgwù, na nkwekọ, iji mepụta ihe onwunwe nke nwere ike itinye Chineke dị ka Daime ( Dawson 2007: 78-79).
Ọnwụ nke Mestre Irineu na 1971 bụ nke usoro esemokwu na esemokwu nke ụlọ ọrụ na-esote ngwa ngwa, na-ahapụ n'oge ọ na-agbagwoju anya na mkpokọta nke otu dị iche iche na ebumnuche nke ịdị mfe na-agbadata na isi abụọ. Alto Santo bụ ụyọkọ chọọchị ndị dịbu na steeti Acre. Ndị ọzọ dị iche iche nwere ụka dị na Brazil na gafee ụwa ndị jikọrọ aka na CEFLURIS (Labate na Pacheco 2011: 71).
N'ime ahịrị abụọ a, CEFLURIS bụ ọnụọgụ ọnụọgụ na nke nhazi, mana ọ ka pere mpe. Otu atụmatụ emeputara na nso nso a kwuru na ọnụọgụ ndị niile na-eji ayahuasca na Brazil gafere 11,000 (Labate 2006: 202). Site na iwu nke CEFLURIS na 1989, nke dị na Céu do Mapiá, a na-ahazi usoro iwu na usoro ọrụ gọọmentị iji weta usoro nnabata ụlọ ọrụ dị iche iche na ụka dị iche iche na otu ndị ejikọtara nzukọ a. Ka o sina dị, CEFLURIS ka na-agbanwe, na-agbanwe agbanwe, na nzukọ dịgasị iche iche, na ọtụtụ ndị isi obodo mgbe ụfọdụ na-agbanwezi ụdị omenala ndị dị na mbụ na / ma ọ bụ na-azọrọ mmụọ nsọ Chineke maka ọbịbịa nke usoro ememme ọhụụ (Dawson 2007: 93-96). Ihe ndi ohuru a, n’aka nke ha, na-emeputa nzaghachi siri ike nke ndi n’etiti CEFLURIS ndi n’enwe ike iguzosi ike n’ezi ihe na odidi nke ndi mmadu n’ile anya dika ihe ndi ozo.
Na 1985, n'ihi nhụbawanye nke ojiji nke ayahuasca na obodo ndị mepere emepe na Brazil, ngalaba nke Ozi
nke Health Banisteriopsis caapi na ndepụta nke ọgwụ ndị amachibidoro iwu, mana na-enweghị ndụmọdụ dị mkpa na Council Narcotics Council ma ọ bụ CONFEN. Mgbe arịrịọ sitere n'aka ndị nnọchianya nke União do Vegetal, Okpukpe ọzọ nke ayahuasca na Brazil nke chọrọ iwepu ọchịchị ahụ, CONFEN guzobere otu ọrụ iji nyochaa ihe oriri ayahuasca pụtara na Brazil (Dawson 2007: 70). Mgbe afọ abụọ nke nyocha gasịrị, gụnyere ọtụtụ nleta n'ọtụtụ ogige União do Vegetal na Santo Daime, CONFEN wepụtara ihe ọ chọpụtara na August 26, 1987. CONFEN kwuru na ndị okpukpe ayahuasca ejirila ayahuasca mee ọtụtụ afọ na-enweghị mmerụ mmekọrịta ọhaneze ọ bụla, na, n'eziokwu, na ojiji a mere ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmekọrịta onwe onye kawanye njọ. CONFEN mere ka atụ aro ka ewepụ ayahuasca na ndepụta gọọmentị nke ihe amachibidoro. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mkpesa ndị sochirinụ dugara n'ọtụtụ nyocha nke gọọmentị, iji ojiji ayahuasca eme ihe iwu na Brazil (MacRae 1992: 75).
N’uwa ụwa, ọnọdụ iwu nke ọdịnala Santo Daime dị iche site na mba rue mba. Na February 21, 2006, a kwadoro nkwado iwu nke ojiji okpukpe ayahuasca na United States mgbe Courtlọikpe Kasị Elu kpebisiri ike na-akwado UDV. (Bronfman 2011: 299). Site na nke a, na Machị 19, 2009, onye ọka ikpe mpaghara US kpebiri na DEA amachibidoro ya anya "ịmịnye sacrament nke Daime tea" site n'aka ndị ọrụ Santo Daime na Oregon (Ikpe 1: 08-cv-03095-PA Document Ogbe 161). Agbanyeghị, ọnọdụ iwu nke Santo Daime na steeti ndị ọzọ n'ime US ka edoghị anya. Churchlọ ụka Santo Daime bụ iwu na Netherlands, mana iwu ya na mba ndị ọzọ (dịka, Spain, England, Germany, Italy, France, Canada) na-aga n'ihu na-arụrịta ụka, yana ọkwa dịgasị iche iche nke ọganiihu.
Na Septemba 27, CONAD (onye nọchiri ọchịchị na CONFEN) kwadoro akwụkwọ nke Multidisciplinary Working Group mepụtara na Nọvemba 2006, 11Grupo Multidisciplinar de Trabalho) nke gụnyere ndị nnọchi anya União do Vegetal, Santo Daime (ma usoro Alto Santo na CEFLURIS) Barquinha (okpukpe ayahuasca ọzọ), yana ndị nyocha si n'ọtụtụ ebe. N'ime akwụkwọ a, okpukpe dị iche iche ayahuasca kọwara ụkpụrụ na usoro kwekọrọ n'iji okpukpe ayahuasca eme ihe, wee nye usoro iwu nke ụkpụrụ omume nke na-anwa ịhazi mmepụta na njem nke ayahuasca, yana iji gbochie ojiji ekwesighi (Labate, MacRae na Goulart 2010: 6). Emere nkwado nke CONAD na Jenụwarị 1, 2010, na-eme ka ọ bụrụ iwu na Brazil niile. (Mkpebi # 1 nke Official Journal of the Nation - Diário Oficial da União - Nkebi nke 1, peeji nke 57-60).
Ka o sina dị, ọtụtụ esemokwu dị n'etiti okpukpe dị iche iche ayahuasca na Brazil ka dị. Otu n'ime isi okwu nke esemokwu sitere na mmegide kpụ ọkụ n'ọnụ nke União do Vegetal, Barquinha, na usoro Alto Santo nke Santo Daime maka iji chọọ ụka nke CEFLURIS mee ihe n'ụzọ okpukpe. CEFLURIS Daimistas na-ezo aka na mmanya "Santa Maria." Padrinho Sebastião bụ “ndị na-azụ azụ” nọ n’obodo mepere emepe na-eleta Colônia Cinco Mil. O mechara kwuo na Santa Maria bụ nwanyị ibe ya na Daime, Santa Maria bidoro rie ya mgbe a na-eme emume Santo Daime, ọkachasị uche (MacRae 1970: 1992.) na a kwadoghị Santa Maria maka iji ememe, mmachi a na-aga n'ihu taa (Dawson 58: 2013.)
Image # 1: Raimundo Irineu Serra, onye guzobere ọdịnala Santo Daime.
Foto # 2: Padrinho Sebastião.
Image # 3: Santo Daime ememe (salão).
Image # 4: A na-acha ọcha edo edo n'oge emume Santo Daime.
Foto # 5: Singbụ ukwe nke hini.
Foto # 6: Ihe Nlereanya nke Santa Daime mirações.
Foto # 7: Nkwadebe ememme nke Daime.
Image # 8: Esi nri nke Daime.
Foto # 9: Osisi ayahuasca.
Bronfman, Jeffrey. 2011. "Iwu nke União do Vegetal na Gọọmentị nke United States." Pp. 287-300 na International nke Ayahuasca , nke Beatriz Caiuby Labate na Henrik Jungaberle dere. Berlin: Lit Verlag.
Carioco, Jairo da Silva. Nd “Akaụntụ Onwe Onye nke Ozizi Santo Daime.” Nweta site na http://afamiliajuramidam.org/english/personal_accounts/jairo_carioca.htm na 15 December 2012.
Ihe ndi ozo, Arneide. 2006. "Rituals nke Santo Daime: 'Systems of Symbolic Constructions'." Pp. 256-85 na Ọrụ ubi na Okpukpe, nke Beatriz Caiuby Labate na Edward MacRae dere. London: Equinox.
Couto, Fernando da La Rocque. 1989. Santos e xamãs . Dissertação (Mestrado em Antropologia) - Universidade de Brasília.
Dawson, Andru. 2007. Oge Ọhụrụ - Okpukpe Ọhụrụ: Mgbanwe Okpukpe na Contemporary Brazil. Burlington, Vermont: Mbipụta Ashgate.
Dawson, Andru. 2013. Santo Daime: Okpukpe Worldwa Ọhụrụ. London: Bloomsbury.
Fróes, Vera. N'afọ 1986. Santo Daime Cultura Amazônica: História do Povo Juramidam. Manaus, Brazil: Suframa.
"Genealogy nke Santo Daime Doctrine." nd Nweta site na http://afamiliajuramidam.org/english/the_children_of_juramidam/genealogy.htm#genealogia na 13 November 2012.
Atelọ nyocha, Beatriz Caiuby. 2006. “Akwụkwọ ndị Brazil na okpukpe Ayahuasca.” Pp. 200-34 n'ime Ọrụ ubi na Okpukpe, nke Beatriz Caiuby Labate na Edward MacRae dere. London: Equinox.
Labate, Beatriz Caiuby, Edward MacRae na Sandra Lucia Goulart. 2010. "Brazil ayahuasca okpukpe na n'ọnọdụ." Pp. 1-20 n'ime Ayahuasca, Ritual na Religion na Brazil, nke Beatriz Caiuby Labate na Edward MacRae dere. London: Equinox.
Labate, Beatriz Caiuby na Gustavo Pacheco. 2011. "Akụkọ banyere Santo Daime: Historical, Adepts, and Ideology." Pp. 71-84 n'ime International nke Ayahuasca, nke Beatriz Caiuby Labate na Henrik Jungaberle dere. Berlin: Lit Verlag.
MacRae, Edward. N'afọ 1992. Nduzi nke Ọnwa: Shamanism na Ritual Use of Ayahuasca na Santo Daime Religion dị na Brazil. Nweta site na www.neip.info na 20 January 2013.
Moreira, Paulo na Edward MacRae. 2011. Eu Venho de Longe: Mestre Irineu e seus companheiros. Salvador, Brazil: EDUFBA-UFMA-ABESUP.
Polari de Alverga, Alex. 2010. Okpukpe nke Ayahuasca: Ozizi nke Chọọchị Santo Daime. Rochester, Vermont: Egwuregwu Street Street Press.
Schmidt, Titti Kristina. 2007. Omume dị ka Omume: Santo Daime, Eco-Religious Movement na Amazonian Rainforest. Akwụkwọ Ph.D, Mahadum Uppsala, Sweden.
Shannon, Benny. 2002. Antipodes nke Mind: tingdepụta Phenomenology nke Ayahuasca Ahụmahụ. New York: Oxford University Press.